လူတို့သညျအဘို့အအသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications သစ်ကြံပိုး
နံရံကပျကျွွောငာ 12.07.2018 24.07.2018 ကျန်းမာခြင်း, interesnenkoe
သစ်ကြံပိုး - မုန့်စိမ်း-ဖုတ်ထူးခြားတဲ့ချိုမြိန်-Woody အမွှေးအကြိုင်ပေးသောမွှေးနံ့သာမျိုး, တစ်လန်းဆန်းနံနက်ကော်ဖီနှင့်လူများစွာစပ်တဲ့ဖန်ခွက်နှင့်အတူရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလပျော်ပွဲစားအတူပေါင်းသင်းစေသည်စပျစ်ရည်ကိုပေးရမယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုသာစပ်သစ်ကြံပိုးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမဖြစ်သင့် အမွှေးအကြိုင်။ ဒါဟာအရှေ့ပိုင်းအမွှေးအကြိုင်အတွက်အချက်အပြုတ်စမ်းသပ်ချက်မျိုးစုံမှ, ဒါပေမယ့်လည်းရင်းနှီးဘဝမှအမွှေးအကြိုင်ထည့်သွင်းဖို့သာတတ်နိုင်သည်ကိုထုတ်ပြန်သွားလေ၏။
ကိုယ်ခန္ဓာကိုမှသစ်ကြံပိုးများအသုံးပြုမှု ငြင်းပါ! ငါတို့သည်, အရငျးနှီးကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအရှေ့တိုင်းနံ့သာစကားပြောနေကြသည်ဆိုပါက - တကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်အိပ်ရာအတွက်မနှစ်မြို့ဖွယ်ပြဿနာများရန်ဆုံးဖြတ်သည်တော်မူသောသင်တို့အကောင်းဆုံးသဘာဝအလက်ထောက်။ "ဒါကြောင့်လွယ်ကူ!" ဒါဟာအမျိုးသမီးလိင်စိတ် restore မှအမျိုးသားများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကျော်လွှားထံမှသစ်ကြံပိုး halfpenny နိုင်ပါတယ်သင်သည်အဘယ်သို့ပြောပြလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးပါတန်ဖိုးရှိ!
ဒါဟာသွေးတိုးရောဂါအမျိုးသမီးအထီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ခွန်အားမရှိခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်အားနည်းခံစားရလျှင်နေဆဲ, ရငျးနှီးဘယ်လိုမေးခွန်းတစ်ခုရှိနိုင်ပါသည်။
တန်ဖိုးရှိသော cinnamaldehyde vasodilation အားပေးအားမြှောက်နဲ့အချစ်ဆုံးလိင်စိတ်ပြန်လာခြင်းဖြင့်သွေးဖိအားကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ။ သစ်ကြံပိုးထုတ်ယူအတူအရှေ့တိုင်းနံ့သာသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမွှေးကြိုင်ဖယောင်းတိုင်နှင့်အတူအနံ့အချိုပွဲ, သင်မြင်လိမ့်မယ်, အနည်းဆုံးသာယာသောညနပေိုငျးအတှကျအသာယာသောအစအဦးဖြစ်လိမ့်မည်။
သစ်ကြံပိုး, ဖြင့်နာကျင်ရာသီဖျက်သိမ်းရေး, အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာချို့ယွင်းသောပမာဏကိုတိုးပွါးလိင်စိတ်ကိုတိုးပွားစေခြင်းနှင့်နွေးထွေးမှု၏အပျော်အပါးတိုးပွားစေပါသည်။
သစ်ကြံပိုးခေါက်၏ပြင်းထန်သော, ချိုမြိန်, နွေးအနံ့ခိုင်ခံ့သောကော်ဖီထက်ပိုမိုအားကောင်း invigorate! အမွှေးအကြိုင်သည်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုးမြှင်နှင့်စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကအာရုံစိုက်နှင့်လှုံ့ဆော်ရန်ကူညီပေးသည်။ သစ်ကြံပိုးခေါက်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ, နွေးထွေးမှုတစ်ခုအသိပေးရမည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုပပျောက်ခြင်းနှင့်ဿုံအပန်းဖြေ။
သစ်ကြံပိုး - သင့်လိင်အသက်တာ၏ "နှလုံး"
နံ့သာမျိုး၌ပါရှိသောအသုံးဝင်သောတ္ထုများ, နှလုံးသွေးကြောစနစ်ကိုအားကောင်းနှင့်နှလုံးရောဂါတားဆီးတစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ သင်သိအဖြစ်တစ်ဦးကကျန်းမာနှလုံး, - တစ်ဦးအရည်အသွေးအပေါင်နှင့်ကြာရှည်ခံရင်းနှီးသော zhizni.K တူညီတဲ့အမွှေးအကြိုင်အတွက်ကြမ္မာငင်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းမှလူသား၏လှပတစ်ဝက်ဖျက်သိမ်းရေး, အိုးထဲမှာသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်တိုးတက်စေရန်ကူညီပေးသည်။ အမျိုးသားများအတွက်မှတ်ချက်ယူ: "Oh, ဘာခေါင်းကိုက်ခြင်း ... " မရှိတော့အလုပ်လုပ်!
သကြား level ကိုပုံမှန်
ဆီးချိုရောဂါကနေဆငျးရဲခံရသဖြင့်, ရငျးနှီးရှေ့တွင်ပြဿနာများကနေပိုပြီးဆင်းရဲခံရသောအမျိုးသမီးများအကြောင်းယောက်ျား၏တစ်ဝက်နှင့်လေးပုံတပုံ။ ဆီးချိုရောဂါအမျိုးသားများတွင်သုတ်ရည်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုနိုင်ပါတယ်ခွန်အားမရှိခြင်းသို့မဟုတ်လူသားတို့၏ပင်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းခိုင်မာတဲ့ဝက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ အမြိုးသမီးမြားရဲ့သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အဆင့်ဆင့်၏ချိုးဖောက်မှုစောစောသွေးဆုံးလိင် drive ကိုနှင့်အတူပြဿနာများပေါ်ပေါက်လာစေနှင့်ပင်ရင်းနှီး blizosti.Mnogochislennye လေ့လာမှုခံစား၏မရှိခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်သစ်ကြံပိုးသွေးသကြားဓာတ်အဆင့်ကိုတည်ငြိမ်စေရန်ကူညီပေးသည်နှင့်ရင်းနှီးသောဘဝကိုတည်ထောင်နိုင်ရန်ကူညီပေးသည်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ 1 နာရီ။ L. တစ်နေ့လျှင်မွှေးနံ့သာလိင်စိတ်၏ပြဿနာကိုဖယ်ရှားပစ်အသစ်တစ်ခုအဆင့်အထိလိင်ဘဝမြှင့်နိုင်ပါသည်။
အမွှေးအကြိုင်နိုင်စွမ်းသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ထိခိုက်စေပါကလိင်အင်္ဂါမှသွေးစီးဆင်းမှုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးတွေအတွက်လိင်စိတ်တိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကပိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု၏ဖိနှိပ်မှု - အလွန်ကြီးစွာသောသစ်ကြံပိုး, အမျိုးသမီးမျိုးပွားမှုစနစ်အပေါ်သက်ရောက်မှု erogenous မှတ်များ၏ sensitivity ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ဖြည်။
ဤကဲ့သို့သော? သူတို့ကကျေးဇူးတင်ကြလိမ့်မည် - သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူမျှဝေဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်!
categories အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါဗွီဒီယိုများ (44)Horoscope (2)ကနျြးမာရေး (85) ကနျြးမာရေးဆိ (21) မိခင်ကနျြးမာရေး (15)Interesnenkoe (232)အလှအပ (33) အစားအစာ (8) ဖက်ရှင် (10)မတ်ေတာသညျ (20) relationship (20)သားဖွား (54) ကိုယ်ဝန် (15) ပညာရေး (31)အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက် (3)Power က (18) မိခင်နို့တိုက်ကျွေး (2) Power ကသူနာပြုမိခင်များ (2) တစ်နှစ် (13) ထိလအားဖြင့်မွေးဖွားထံမှကလေးတစ်ဦးအစာကျွေးခရီးသွား (4)ချက်ပြုတ်နည်း (1 303) ဒုတိယအဟင်းလျာများ (715) အချိုပွဲ (252) ပထမဦးစွာသင်တန်းများ (330)မိသားစုနှင့်နေအိမ် (60) လက်တွေ့အကွံဉာဏျ (Layfkahi) (37)အိပ်မက် (38)
မူပိုင်ခွင့်© 2019 MamaClub။ ကနေဆောင်ပုဒ် Colorlib စွမ်းအားဖြင့် WordPress